Su'aalaha La Weydiiyo - Jiande Chaomei Daily Chemicals Co., Ltd.
Sideen ku heli karaa tijaabada
Haddii aad u baahan tahay tijaabo si aad u tijaabiso, waxaan u sameyn karnaa sida aad codsatay.
Hadday tahay alaabteenna caadiga ah ee kaydka ah, adigu waxaad iska bixinaysaa kharashka xamuulka oo muunadku waa lacag la'aan.
Ma noo samayn kartaa naqshad
Adeegga OEM ama ODM waa la heli karaa. Waxaan u qorsheyn karnaa badeecad iyo xirmo ku saleysan baahida macaamiisha
Sidee ku saabsan midabka?
Midabada caadiga ah ee alaabada la dooranayo waa cadaan, cagaar, buluug Midabyo kale ayaa sidoo kale la dooran karaa.
Sidee ku saabsan maadada?
pp aan tolmo wanaagsan lahayn, Kaarboon firfircoon (ikhtiyaar), cudbi jilicsan, dhalaal miiraha la afuufay, waalka (ikhtiyaar).
Ka waran waqtiga macdanta ee wax soo saarka ballaaran?
Si daacadnimo ah, waxay kuxirantahay tirada amarka iyo xilliga aad amarka bixiso.
Guud ahaan, waqtiga hogaamintu wuxuu ku saabsan yahay 20-25days. Marka waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad bilowdo baaritaanka sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah.